Booliska Maraykanka oo soo qabtay maxbuuskii labaad ee ka baxsaday xabsiga New York (Sawiro) | Sagal Radio Services
Sida ay warbaahinta Maraykanka shaacisay David Sweat ayaa laga soo qabtay meel ku dhow xadka Maraykanka uu la leeyahay wadanka Canada. Waxana haatan la dhigay isbitaal Alice Hyde Medical Center ee Malone New York halkaa oo loogaga daweynayo dhaawac rasaas oo ku dhacday markii ay Boolisku qabanayeen.
Jimcihii aynu ka soo gudubnay ayay booliska Maraykanka toogasho ku dileen Richard Matt oo ahaa maxbuuskii kale ee baxsadka ahaa waxana la sheegay in uu diiday in uu is dhiibo Matt kadibna rasaas ay boolisku ku rideen ayaa madaxa kaga dhacday.
Labadan maxbuus ayaa ka baxsaday saddex toddobaad kahor xabsiga sida weyn loo ilaaliyo ee Clinton Correctional Facility iyagoo dhex maray dhuumanka wasaqda ka qaada xabsiga kadib markii ay u isticmaaleen koronto iyo qalab kale.
Baxsashada labadan maxbuus ayaa waxaa soo jiitay indhaha caalamka iyadoo baxsashadana ay noqotay mid shabahda aflaamta la daawado ee qayaaliga ah. Waxana wargeysyada caalamka ay ka qoreen wax badan sheekada baxsadka labadan maxbuus.
Baadigoobka labadan maxbuus oo qaadatay muddo saddex toddobaad ah ayaa loo adeegsaday diyaaradaha qumaatiga u kaca,eeyo,gaadiidka dagaalka iyo gaadiid gaar ah oo mari kar meelaha cariiriga ah. Boqolaal ciidamo kala duwan ah ayaa ka qeybgalay sidii loo soo qaban lahaa labadan maxbuus ee sida sahlan ugaga baxsatay xabsi ku yaal magaalada New York.
Labo ruux ayaa loo haystaa haatan inay gacan siiyeen maxaabiistan sidii ay u baxsan lahaayeen iyadoo labada ruuxba ay ka mid yihiin shaqaalaha xabsiga.
Tags Booliska USA